FAQ: Flash Friday – SUNNY eSTORE
FAQ: Flash Friday
Flash Friday ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
သောကြာနေ့တွေမှာ ပြုလုပ်တဲ့ SUNNY eSTORE မှ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အရောင်းမြှင့်တင် ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတွင် ထိပ်ဆုံးတံဆိပ်များမှ ပစ္စည်းများကို ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် discount များဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
SUNNY eSTORE ၏ Flash Friday အစီအစဉ်များတွင် ယခင်က ပါဝင်ခဲ့သည့်တံဆိပ်များနှင့်ပစ္စည်း များထဲတွင် - Huawei နှင့် Xiaomi မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ Acer laptop များ၊ Remax audio ပစ္စည်းများနှင့် အခြားများစွာ ပါဝင်သည်။
What isaFlash Friday?
It is an exciting promotion from SUNNY eSTORE on Fridays when attractive discounts are available on products from top brands.
Past brands and products that have participated in SUNNY eSTORE’s Flash Friday include: Huawei and Xiaomi mobile phones, Acer laptops, Remax audio devices, and many more!
Flash Friday အစီအစဉ်များကို ဘယ်အချိန်မှာ ရရှိနိုင်သလဲ။
Flash Friday အစီအစဉ်များအား သောကြာနေ့တိုင်း(နီးပါး) နံနက် ၁၂ နာရီ (ကြာသပတေးည သန်းခေါင်) မှ ည ၈ နာရီ (သောကြာနေ့ည) တွင် ပြုလုပ်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ ဥပမာ - ဝယ်ယူသူများ၏ တောင်းဆိုမှုများသည့်အခါများတွင် နံနက် ၁၂ နာရီ (သောကြာညသန်း ခေါင်) အထိ တိုး၍ပြုလုပ်ပါသည်။
When are the Flash Fridays available?
Flash Fridays take place (almost) every Friday from 12AM (Thursday midnight) to 8PM (Friday evening). On some occasions, e.g. when there is high customer demand, these may be extended to 12AM (Friday midnight).
အခြားဖော်ပြချက်များ ရှိသည့်အခါများမှလွဲ၍ SUNNY eSTORE ၏ ဝယ်ယူသူအားလုံး Flash Friday အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
All SUNNY eSTORE’s customers are eligible to participate in Flash Friday deals, unless otherwise specified.
COM.MM မှာ ရှိတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ website ပေါ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ Flash Friday အစီအစဉ်စာမျက် နှာမှာ အစီအစဉ်များအား တိုက်ရိုက်မှာယူခြင်းဖြင့် သင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
အခြားနည်းလမ်းမှာ သောကြာနေ့နံနက် ၇နာရီမှ ည ၈နာရီကြား ကျွန်ုပ်တို့၏ Customer Service Hotline ဖြစ်သည့် ၀၉ ၈၉၁ ၇၄၉၄၈၉ ထံ ခေါ်ဆို၍ အမှာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် သောကြာ ည ၈ နာရီမတိုင်မီ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook messenger chat မှာ ရေးသားပြီး မှာယူနိုင်ပါသည်။
You can participate by ordering the deals directly from our Flash Friday promotions page on our website at SUNNY.COM.MM
Alternatively, you can also call our customer service hotline at 09 891 749489 between 7AM – 8PM on Fridays to place your order, or simply drop usanote on our Facebook messenger chat before 8PM on Fridays.
Flash Friday အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် အမှာဘယ်နှစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်သလဲ။
KBZPay နှင့် ကြိုတင်ပေးချေမှုဖြင့် ပေးချေမှုပြုလုပ်ရန် ရွေးချယ်ပါက သင် မှာယူနိုင်သည့် အရေအ တွက်မှာ မည်သည့်အကန့်အသတ်မှ မရှိပါ (ပစ္စည်း stock လက်ကျန်ရှိနေသည့်အထိ)။
Cash on Delivery ဖြင့်လည်း သင် အမှာများစွာ မှာယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အစီအစဉ်သည် အရမ်း လူကြိုက်များနေပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် ပထမဦးဆုံးတွင် အမှာ (သို့မဟုတ် ပစ္စည်း) တစ်ခုကိုသာ အတည်ပြုနိုင်မည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် သင့်အမည်အား စောင့်ဆိုင်းစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားပြီး၊ အစီအစဉ်ပိတ်သည့်အခါတွင် ပစ္စည်းလက်ကျန်ရှိနေသေးပါက သင်၏ကျန်ရှိနေသည့်အမှာကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။
How many orders can I make duringaFlash Friday deal?
If you choose to pay with KBZPay and pay upfront, there is no limit to the number of orders you can make (as long as the deal is still running and the products are in stock)!
For Cash on Delivery, you can also make multiple orders. But if the deal is very popular we may only be able to confirm one order (or product) at first. In such cases, we will add your name toawaitlist and contact you at the end of the deal should there still be available stock and we are able to fulfill the rest of your order.
ကျွန်ုပ်ရဲ့ KBZPayblue app စာရင်းထဲသို့ KBZPay cashback ကို ဘယ်အချိန်မှာ ရရှိမှာလဲ။
အစီအစဉ်ထဲတွင် KBZPay cashback ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်း ပါဝင်ပါက ပေးချေမှုတွင် အသုံးပြုခဲ့ သည့်စာရင်းထဲသို့ KBZPay cashback အား ကျွန်ုပ်တို့ သွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းအား ပစ္စည်းဝယ်ယူပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ ၇ ရက်အတွင်း ပြုလုပ်သွားပါမည်။
When will I receive KBZPay cashback in my KBZPay blueapp account?
Should the deal include KBZPay cashback option, we will deposit the KBZPay cashback to the account which was used to make the transaction payment.
This will be done within7days of purchase.
Flash Friday အစီအစဉ်များ၏ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးသဘာဝကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပစ္စည်း(များ) ပို့ပြီး သည့်အခါတွင် အမှာများဖျက်သိမ်းခြင်းကို လက်မခံပါ။
Flash Friday အစီအစဉ်များအတွက် ငွေပြန်အမ်းယူမှုကို လက်မခံပါ။
Due to the promotional nature of the Flash Friday deals, we do not accept cancellations of orders once we have delivered the product(s).
Refunds are not allowed for Flash Friday deals.
Are there any other that apply?